Topnepalnews.com | वडा कार्यालयमा कस्ले र किन पड्कायो बम ?
वडा कार्यालयमा कस्ले र किन पड्कायो बम ?
Posted on: October 14, 2019 | views: 7337
हेटौडा । थाहा नगरपालिका ५ को कार्यालयमा आगजनी गरेको आशंकामा पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ परेकाहरुसँग अनुसधान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवापनुरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मुकेशकुमार सिंहले बताउनुभयो । यसअघि पनि श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा आगजनी भएका थिए । त्यसलगतै वडा कार्यालयमा पनि पनि आगजनी भएको हो ।
आइतबार राति नगरपालिकाको आरनडाँडामा रहेकोे कार्यालयमा आगजनीमा संलग्न रहेको आशंकामा इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो । आइतबार राति कार्यालयको ढोका फुटाएर पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किएर आगो लगाएको बताइएको छ ।
पेट्रोल तथा मट्टीतेल लगिएको बोतल कार्यालय छेउवमा नै भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । आगजनीबाट कार्यालयको कागजपत्र तथा फर्निचर जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लोकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
आगजनीका कारण कार्यालयको कम्प्युटर, प्रिन्टरसहितका विद्युतीय उपकरण र कार्यालय प्रयोजनका सामग्री जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।